Ukukhiqizwa kobungcweti kwezingxenye zomjovo wezimoto ezinekhwalithi eqinisekisiwe |
Ukukhiqizwa kobungcweti kwezingxenye zomjovo wezimoto ezinekhwalithi eqinisekisiwe
Izingxenye zepulasitiki zezimoto, okungukuthi, izesekeli zomkhiqizo ezenziwe ngepulasitiki ezimotweni. Izingxenye zepulasitiki zisetshenziswa kakhulu ezimotweni. Phakathi kwazo, izingxenye zomzimba nezingxenye zangaphakathi zivame kakhulu, futhi izingxenye zangaphakathi yizo eziningi kakhulu.
Izingxenye zomjovo wezimoto
Umsuka: impahla ye-huaian jiangsu:inayiloni，I-PA6 / MC
igama lomkhiqizo:Izingxenye zomjovo wezimoto
inqubo:Injection molding / centrifugal casting / CNC machining
umbala:Imibala yangokwezifiso isampula:Umthengi wezindleko
Umkhiqizo: Injection yeHaida: ukusakaza nge-centrifugal
Izinzuzo zezingxenye zepulasitiki zezimoto
(1) Isisindo esincane
Enye yezinzuzo ezivelele zezinto ze-polymer zezimoto isisindo sayo esincane namandla amakhulu. Ngoba isilinganiso samapulasitiki ahlukahlukene singu-15-20% kuphela wensimbi ejwayelekile ejwayelekile, futhi silula kunezinkuni ezijwayelekile. Lesi sici sizuzisa ikakhulukazi izimoto ezisezingeni eliphakeme, ezinganciphisa isisindo esiningi.
(2) Izici eziphelele zomzimba nezamakhemikhali
Enye inzuzo yezinto ze-polymer zezimoto ukuthi zinemisebenzi eminingi futhi zingasetshenziswa ngezikhathi ezikhethekile. Ipulasitiki inezinto ezinhle zokuhlukanisa, ukumelana nokugqwala okuhle, ukumelana nokuguga, ukumelana okuhle nokukhuhla, ukusebenza kahle okungangenwa manzi nezakhiwo zemishini, izakhiwo ezinhle zokubopha, futhi kucutshungulwa kube yizinhlobo ezahlukahlukene Izikebhe ezahlukahlukene zangaphakathi nezingaphandle zezimoto ezidinga ukusebenza okuningi futhi imisebenzi.
(3) Umphumela omuhle wokuhlobisa
Inzuzo evelele kakhulu yezinto ze-polymer zezimoto ngumphumela omuhle kakhulu wokuhlobisa. Ingacutshungulwa ibe yimikhiqizo enezimo eziyinkimbinkimbi nemibala eminingi ngasikhathi sinye, futhi kwesinye isikhathi idinga ukuthi iphrintwe, iqoshwe, ifakwe embossed, ilaminishwe futhi ifakwe imibala. Kwenziwa isithombe sangempela, iphethini nephethini, engalingisa ukhuni lwemvelo, insimbi, Ukuthungwa kwesikhumba sezilwane nakho kungagxivizwa, kuqoshwe, kufakwe isiliva, kufakelwe ubulembu, njll.
(4) Ukusebenza okuhle kokucubungula
Ngenxa yobuningi bezinto ze-polymer nokuhambisana okuhle nezinye izinto, kungasetjenziswa izinto ezahlukahlukene, ngosizo lwemishini yokucubungula yesimanje ehlukahlukene, ngokusebenzisa i-extrusion, i-injection molding, i-calendering, i-molding, i-blow molding Ingacutshungulwa ibe yimoto ye-polymer izinto ezinokuma okuhlukile, izakhiwo ezahlukahlukene, imibala ehlukile, nemisebenzi ehlukile ngezinye izindlela, njengokukhishwa okuqondile kumaphayiphi, amaphrofayli, amapuleti, umjovo emikhiqizweni enezimo ezahlukahlukene, i-calendering kumafilimu, njll. , i-interlayers, imigodi, ukufaka neminye imikhiqizo ngokuya ngezidingo. Kungabuye kusetshenzwe okwesibili ngokuya ngezidingo, njengokujika, ukushaya isibhakela, ukusika, ukushisela, nokuncibilika okushisayo kwemikhiqizo eyenziwayo. , Cold isaha, kwakwakhe, njllAmandla Wokunikezela: Bona ivolumu yokuthenga
Imininingwane yokupakisha: Imvamisa sisebenzisa i-bubble film plus amakhadibhodi amabhokisi, futhi uma kunesidingo, kuzosetshenziswa amaphalethi wokhuni noma amabhokisi enkuni. Izinto ezincane zigcwele izikhwama zokuzivala + amabhokisi. Izinto ezinkulu zigcwele izikhwama zokhuni + amabhokisi enkuni.
Langaphambilini Okukhethekile ekukhiqizweni kwezilayida ze-crane nylon ezinolwazi olunothile
Izithuthi Injection Molded Izingxenye
Umjovo Molding Izingxenye Izithuthi